ဒို့ဘာသာ (၃) ရော့၊ အင့်လို့မရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒို့ဘာသာ (၃) ရော့၊ အင့်လို့မရ
ဒို့ဘာသာ (၃) ရော့၊ အင့်လို့မရ
Posted by ashinindaka on Aug 22, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
သတိပဋ္ဌာန် စသဖြင့် အကြောင်းအရာ မျိုးစုံဘဲ။
ဘုရားရှင် ပွင့်ထွန်းခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ မပွင့်ထွန်းခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊
သူတပါးအသက်သတ်ရင် သတ်ခြင်းကြောင့် သဘာဝတရားဖြစ်တဲ့
ဘုရားရှင်က မပြောပြရင် ဒို့တတွေ သိမှာ မဟုတ်ဘူး။ သိခွင့်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘုရားရှင်ပြောပြခဲ့လို့ ဒို့တတွေ နားလည်ပြီး ကျင့်သုံးခွင့် လိုက်နာခွင့်ရတာ။
ဒီတော့ ဒီလို ဆောင်တတ် ရှောင်တတ်ကျင့်ကြံတတ်အောင်
ဘုရားရှင်ထံမှ တစုံတခု မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ကပ်လှူရတာမဟုတ်ဘူး။
‘ရော့၊ အင့်’ လို့
အရှင်ဘုရား ကျန်းမာတော်မူပါစ ဘုရား … အရှင်ဘုရားရေးထာသောစာပေတွေ ဖတ်ရှု့၍ မရပါဘုရား ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ဖောင့် အမျိုးအစားအသုံးပြုထားပါလဲသိပါရစေဘုရာ့…တပည့်တော် တစ်ယောက်ထဲ ဖတ်ရှု့၍ မရဖြစ်ခဲ့ရင် ထပည့်တော်အတွက် ထည့်မစဉ်းစားပါနဲ့ဘုရား… သိတဲ့သူများလဲ အကြံဥာဏ်လေးပေးကြပါအုံးခင်ဗျား…………..
Mozilla Firefox ဆို၇င် Tools>Options>Content>Default font မှာ Zawgyi-one
zawgyi1 ပဲသုံးတာပါ။ Mozilla Firefox နဲ့ဖတ်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ IE က သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ နောက်ဆုံးအဆင့် အဆင်မပြေရင် ကော်ပီလုပ်ပြီး Microsoft Word ထဲ ထည့်ဖတ်ပေတော့ တညင်သားရေ။
မှန်လိုက်လေ…အရှင်ဘုရားကလင်းလိုက်မှဘဲ..ဒဲ့ဒိုးအဖြေဖြစ်သွားတယ်။ လောကမှာဖြစ်နေကြသမျှ အရာအားလုံးဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူ (သို) ဘုရားတဆူဆူကဟောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်၊ လောကရဲ့ နိယာမတရားတွေအရဖြစ်ကြရတာ ဆိုတာ……။
ကံ နဲ့ ကံ၏အကျိုးကိုကိုယ်လိုရာဆွဲတွေးဆွဲပြောနေကြသူတွေအတွက်……….
အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ လောကနိယာမသတ္တိကြောင့်ဆိုတာ အမှန်တရားဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ချည်းသက်သက်သုံးရင် ဥပမာ – သူ့အသက်သတ်ရင် ကိုယ့်အသက်တိုမယ် ဆိုတာမျိုးသည် အပြင်ဖက်လောကမှာ အမြဲတစေ မှန်မနေလို့ နောက်ဆက်တွဲ ရှင်းလင်းချက် ကံ၊ကံ၏အကျိုး၊ သံသရာစသည်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးရသည် ထင်ပါသည်။ မသုံးပဲ လက်တွေ့ဆန်ဆန် အများနားလည်အောင် ပြောပြန်တော့လည်း သူ့အသက်သတ်ပြီး အသက်ရှည်သူများ၊ သီလမစင်ကြယ်ဘဲ ဆေးသိပ္ပံအကျိုးဖြင့် အာယုဆက်နေသူများက ထော်လော်ကန့်လန့် ဖြစ်နေပါသည်။ အကျယ်ချဲ့ပြီး နောင်ဘဝ၊ စိတ်ဇော စသည်တို့ဖြင့် ရှင်းပြန်တော့လည်း သဂျီးတို့လို ရုပ်ဝါဒီများ၊ ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီများ၏ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းမှ မလွတ်ကင်းပြန်ပါ။ ဆရာတော်လို ခေတ်ပညာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှ မည်သည်အကြောင်းအရာကို မည်သို့သောကြောင့် လက်ခံ၊လက်မခံဆိုသည်ကို တိကျပြတ်သားစွာ ပြောဆိုပါမှ စာဖတ်သူအများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများနိုင်ပါသည်။
ယခုလို ရှင်းပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ အရှင်ဘုရား။ယခု အရှင်ဘုရား ဘယ်မှာ သီတင်းသုံးနေပါသလဲ သိချင်ပါတယ်။ခုက ဝါတွင်းကာလမို့ မေးကြည့်တာပါ ဘုရား။
ကြောင်ကြီး says: Agree with you . I want to know too. thanks.